संघीय संरचनाको भविष्य ! – Chitwan Post
संघीय संरचनाको भविष्य !
समय घड्किँदै जाँदा संघीय संरचना उत्पादकभन्दा प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना बढ्दो छ । यसमा स्वयं ठूला दलका शीर्षस्थ नेतागण मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । स्थानीय तहका अधिकांश पदाधिकारी, प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्रीगणको अकर्मण्य चरित्र, संघीय संसद्, कर्मचारी वृत्त पनि यसमा कम जिम्मेवार लाग्दैनन् । यसमा प्रतिपक्ष पनि कम जिम्मेवार छैनन् । स्वयं ठूला दलका ठूला नेता नै आपूmहरुले संघीयताको बीउ रोपेको तर अर्कै बीजाङ्कुरण भएको भन्न थालेका छन् । सुरूदेखि नै संघीयताका विपक्षमा राय राख्दै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठूला नेतामा ढिलो बुद्धि पलाउने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारका बीच क्षेत्राधिकारबारे पटकपटक द्वन्द्व भइरहेको परिस्थिति पनि छ । त्यसै पनि प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारजत्तिकै सत्ता, शक्ति र विलासितामोहले लिप्त बन्दै गएको स्थिति छ । नेताका यही चाला रहे कांग्रेसका दार्शनिक नेता प्रदीप गिरीले भारतले नेपाललाई पनि सिक्किमझैँ निलिदिने दाबी गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा बनेको अत्यन्त सस्तो मुस्ताङ गाडी चढेरै पनि राजधानीका साँघुरा सडक विस्तार गर्ने, हेल्लो सरकारका माध्यमबाट जनगुनासा सुनी तत्काल जनताका समस्या समाधान गर्ने, गरिब जनताका घरमा पुगेर वस्तुस्थिति बुभ्mनेजस्ता उदाहरणीय कार्यहरुबाट सिक्नु वाञ्छनीय थियो । उनले भन्दा अझ रचनात्मक कार्य गरेर जनताको मन जित्नुपर्ने थियो । विकृति र विसंगतिहरु छिमल्न मुख्य कडी बन्नुपर्ने थियो । अहिले देशको खराब स्थिति भएकाले त्यसलाई मन र मुटुमा राखेर देशको संकट र दुःखलाई मोचन गर्न हरपल क्रियाशील हुनुपर्ने थियो, तर उल्टै पुरानै सामन्ती संस्कार र व्यवहारलाई पछ्याउँदै संघका मन्त्री र संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरुले महँगा र नयाँ गाडी चढ्ने सामन्तीय शोख त्याज्य र निन्दनीय पनि थियो । तर, त्यसलाई अंगीकार गर्ने प्रवृत्ति ज्यँुका त्युँ दोहोरिरह्यो । यहाँसम्म कि मुख्यमन्त्रीले थोत्रो गाडी दिएर अपमान गरियो, त्यसैले ल्यान्ड क्रुजर किनेको हुँ भनेर प्रस्तुत हुँदा आखिर हानि संघीय संरचनालाई नै पर्दै गएको छ ।
राम्रो कुराको सिको, प्रभाव र गति ध्वनिको गतिजत्तिको पनि हुँदैन । तर, कमसल कुराको सिको, प्रभाव र गति सूर्यको प्रकाशको गतिभन्दा पनि तीव्र र गतिशील हुन्छ । यसर्थ पनि माथिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संघीय संसद्का महासचिव, संसदीय समितिका सभापति, प्रतिपक्षी दलका नेता, ठूला दलका ठूला नेताहरुको सिको प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका वडाध्यक्षसम्मै पुगेको छ । अझ त्यो तलका गाउँका ससाना नेता र कार्यकर्तामा मात्र होइन, सर्वसाधारण जनता र बालबालिकासम्मै पुगिसकेको स्थिति छ ।
अर्को कुरा, ज्यादै कमजोर र भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश र प्रदेश सरकार संघजत्तिकै शक्तिशाली, पदप्रतिष्ठा र शक्तिमा समेत पौँठेजोरी खेल्नुभन्दा क्रमिकरुपमा सबै संरचना र व्यवस्था तयार हुँदै जान्छन् । आरम्भमा सेवासुविधाभन्दा पनि कामलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने र डटेर काम गर्ने कार्य स्तुत्य हुन्छ । त्यसै पनि कम्युनिस्ट सरकार गरिब जनताका सेवाका निम्ति हो भन्ने तर रोसरवाफ र ठाँटबाँटचाहिँ राजारजौटाका देखाउने प्रवृत्ति विरोधाभासपूर्ण लाग्छन् । चाहे संघका हुन् चाहे प्रदेशका वा चाहे स्थानीय तहका हुन्, सबै देशका सेवक होइन रहेछन् । जनवादी समाजवादी, साम्यवादी, जनताका पीरमर्का बुभ्mने सर्वहारा भनिएका नेतागणमा अप्रत्याशितरुपमा सामन्ती चालढाल, रोसरवाफ र शान देखाउने प्रवृत्ति नपचिरहेको धेरै हितैसीहरुकै ठम्याइ छ ।
कांग्रेसलाई बहुमतदेखि दुई तिहाइ मतले विजय गराउँदा कुनै सुधारका संकेत देखाएनन्, उल्टै विसंगति भित्र्याए । कुनै बेला अल्पमत दिएर मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन गरी नौ महिना सरकार चलाउँदा थुप्रै जनमुखी काम भए । त्यो प्रत्यक्षरुपमा देखेका र अनुभव गरेका जनताले एकपटक झन्डै दुई तिहाइ मत दिएर स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार बनाउने अवसर प्रदान गरेका छन् । जनताका यस मतको उच्च समान र कदर गर्दै मरिमेटेर लाग्नुपर्ने बेलामा विलासितातिर उन्मुख हुनु, काममा भन्दा ज्यादा अर्थहीन भाषणमा दिलचस्पी राख्नु, कर्मचारी फिर्ता गर्ने, संघलाई हाँक दिने, प्राकृतिक स्रोतहरुमा आपसी खिचातानी गर्ने, संघीय मन्त्रीहरुझैँ आर्थिक दुरूपयोग गर्ने, दोहोरो कर लगाउने, करको सदुपयोगभन्दा अनेकौँ बहानामा दुरूपयोग गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलाई समेत गाडी सुविधा दिनेजस्ता प्रदेशका निर्णयहरु कति जनभावना अनुरुप छन् ? यसैलाई आधार बनाउँदै अहिले केही मानिसहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै खुलेआम धाबा बोलिरहेको परिस्थिति छ । जनतामा राजा भए पनि उही नभए पनि उही, बरू राजै भएको भए ठीक हुन्थ्यो कि क्या हो भन्ने मनोविज्ञान पुनर्जागृत हुनथालेको स्थिति छ ।
हुन पनि संसद् सचिवालयले खरिद गरेको सवारीसाधन एक महिना पनि नबित्दै बिग्रेपछि फर्काउनुको सट्टा गपुुचुपमै लगेर मर्मत गराउन लैजानुले झन् आगोमा घिउ थपेको जत्तिकै भएको छ । पूर्वसभापतिले चढेका राम्रा कन्डिसनका गाडीहरु पनि वर्तमान सभापतिहरुले नचढ्ने भनेपछि संसद् सचिवालयले खरिद गरेको नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो । तर, तिनै गाडीहरु पनि एक महिनामै बिग्रिएपछि बाहिरी आवरण एउटा भए पनि त्यसको भित्री पार्टपुर्जाहरु चाहिँ नक्कली हालिएको आशंका भएको छ । यद्यपि, सरकारले जनआक्रोशलाई सामसुम पार्न वा साँच्चै नै भ्रष्टता पहिल्याएर कारबाही गर्न पनि यस्तो कार्यसमिति बनाएको पनि हुनसक्छ ।
संसद् भनेको नीति निर्मातामात्रै नभई नीतिको सही कार्यान्वयन भए÷नभएको हेर्ने, कतै अनियमितता र गडबडी भएको भए सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, जनताका आवाज मुखरित गर्ने, दुःख हर्ने र न्याय, अनुशासन र सदाचारमा रही आदर्शको अप्रतिम नमुना पस्कने थलो पनि हो । यस्तो अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र नै बेलाबखत धर्मराउने गर्दा त्यसले व्यवस्थामाथि नै गम्भीर आँच पु¥याउँदो रहेछ । फर्जी औषधिको बिल, घरभाडा, रातो पासपोर्ट दुरूपयोग, सांसद् खरिद–बिक्री आदि काण्डहरुले संसदीय व्यवस्थालाई मात्र नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै पहिले आक्रोश र पछि निराशा अनि अन्ततः घृणासमेत पैदा गर्ने निश्चित छ । अझ करको दुरूपयोग भइरहेको सन्दर्भ झन् दुःखद लाग्छ ।
हरेक कर तिर्ने नागरिकले आपूmले तिरेका करको सदुपयोग होस् भन्ने ठान्छन् । त्यसमा पनि कर देशको विकास निर्माणमा उपयोगी सिद्ध होस् भन्ने चाहना राख्छन् । शैक्षिक उन्नयनमा सहयोगी सिद्ध बनोस्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो उपयोगी बनोस्, समाजको समृद्धि र विकासमा पनि यसले बढोत्तरी गरोस् । देशको आर्थिक तथा भौतिक विकास गर्ने कार्यमा यसले मद्दत गरोस् भन्ने चाहन्छन् । यही चाहना बोकेका जनताले करको सदुपयोग नभएको देखेकैले कर तिर्नमा जाँगर गरेको पाइँदैन । कर तिर्न भनेपछि भाग्ने, कर छली गर्न खोज्ने, कर तिरे पनि दुःखी हुने, कर तिरेर आएपछि पनि मुरमुरिने, भ्याट तिर्न नखोज्ने जस्ता कैयौँ प्रवृत्ति देखिने गरेका हुन् ।
योगदानमा आधारित पेन्सन सुविधा भनिएझैँ राज्यले करमा गरिएको योगदानमा आधारित रही नागरिकलाई अधिक सम्मान, सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना ल्याए सायद् नागरिकले पनि कर छल्नतिर भन्दा मुनाफा देखाउनैतिर लाग्ने सम्भावना बढ्छ । यसमा करको दायरामा समेत हेरफेर हुनु अपेक्षित छ । राज्यले एक प्रतिशत, दस प्रतिशत, बीस प्रतिशत र जुन तीस प्रतिशत कर बुझाउन दिएको निर्देशनसमेत अलिक भारकारी छ । सुरूको एक प्रतिशत स्वीकार्य रहे पनि दोस्रो दस प्रतिशत लाग्ने दरलाई तीन लाखसम्म, तेस्रोलाई पनि तीन लाखसम्म र यसपछिका दरलाई मात्र तीस प्रतिशत गर्ने हो भने मध्यम आय भएका सबै नागरिकले सहर्ष कर तिर्न रूचि राख्ने सम्भावना रहन्छ ।
यसर्थ, जनताले कर तिर्नमा आनाकानी गरेका हुन् भन्ने कुरामा सरकारले बुझेर तदनुरुप नै नीति निर्माण गर्नु जरूरी छ । साँच्चै भन्दा राज्यले नै जनतालाई लुच्चो र फुच्चो बन्न प्रेरित गरिरहेको जस्तो लाग्छ । कर तिर्नैका निम्ति आपूmले गर्ने त्यसदिनको सेवालाई नै चटक्कै छाडेर दिनै मारेर सुदूर सहरमा अवस्थित कर कार्यालय पुग्न निकै हम्मेहम्मे नै हुन्छ । त्यहाँका प्रायः कर्मचारी महाशयले करदाताप्रति गर्ने व्यवहार पनि कर बुझाउनका निम्ति प्रेरकभन्दा प्रायः आक्रोश उत्पादक नै बन्ने गरेको पाइन्छ ।
हुन त, आजसम्म कर नै नतिरी व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरुका निम्ति कर तिर्ने कुरा हाउगुजीजत्तिकै भएको छ । आजसम्म राज्यलाई तिर्नुपर्ने न्यूनतम कर पनि नतिरी बसिरहेकाहरु अतिरञ्जनात्मक प्रचार गर्ने र सरकारलाई बदनाम गर्ने खेलमा लागिरहेका देखिन्छन् । कतिपयले तिरे पनि आम्दानी अत्यन्त थोरै देखाएर भ्याट बिल नकाटी व्यापार गर्दा राम्रै लाभ भइरहेको धेरैको बुझाइ छ । पहिले घरधुरी कर, घरघडेरी कर, जग्गाजमिन कर, जग्गा बेचबिखन गर्दा लाग्ने कर, सिफारिस लिँदा लाग्ने कर आदि इत्यादिमा लाग्ने करहरु न्यून थिए । तर, अहिले स्थानीय तहसँगै प्रदेश सरकारहरु गठन भएपछि पैसाको खोलो बगिरहेको छ । त्यसरी पानीसरी बगिरहेको पैसाको जोहो गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले जथाभावी कर वृद्धि गरेको र जनताको ढाडै सेकिरहेको जनगुनासो छ । यो फजुल खर्चको स्थितिलाई हेर्दा यो व्यवस्था जनताका निम्ति नभई नेता र तिनका कार्यकर्ताका निम्ति त वरदान सावित भइरहेको होला । तर, देश र जनताका निम्ति ढाडै सेक्ने दशा बनिरहेको घटना भने जबर्जस्त सत्य हो ।
फेरि पनि करको सदुपयोग भई जनताले सोचेझैँ यो विकासमा साधक बनेको भए कर उत्पादक बन्थ्यो । नेतृत्वले जनताको रगत र पसिनाको उच्च कदर गर्थे र पहिले दिलोज्यान लिएर देशको समृद्धि र विकासमा तनमन र वचनले आप्mनो संकल्पअनुसार नै लाग्थे । विनाभेदभाव, विनाभ्रष्टता, विनाधन आर्जन गर्ने लालसा, विनाशानमान शौर्य र सौकत देशमा विद्यमान विकृति र विसंगति साबुनले कपडाको मैला पखालेझैँ पखाल्ने थिए । जब मुलुक समृद्धिको लयमा हिँड्न थालेपछि समय र परिवेशले उनीहरुलाई सारा शानशौर्य र सौकत प्रदान गथ्र्यो । गाडी, घोडामात्रै नभई संसारभरि त्यसले मानप्रतिष्ठा र इज्जत बढाउँथ्यो । तर, नेतृत्वको निकृष्ट स्वार्थपूर्ण सोच र व्यवहारका कारण संसदीय व्यवस्था बदनाममात्रै नभई यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धराशायी बन्ने मोडमा खडा गरिरहेको छ । यसलाई सत्कर्म र सत्संकल्पद्वारा आपूmभित्र पलाएका मह¤वाकांक्षा, सत्तालिप्सा र स्वार्थलिप्साहरुलाई लगाम लगाउँदै जनताका करको र भावनाहरुको उचित व्यवस्थापन नै पहिलो मिसन र भिजन बन्नुपर्छ । तबमात्रै, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्ने गन्तव्यमा मुलुक लम्कने छ । अन्यथा, संघीय संरचना र वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै धराशायी हुन बेर लाग्ने छैन ।